Adobe Photoshop Express dia nohavaozina miaraka amin'ny sticker ary ny effet blur vaovao | Famoronana an-tserasera
Fanavaozana Adobe Photoshop Express miaraka amin'ny sticker, vokarin'ny blur ary andiam-baovao hafa ho an'ny fampiharana finday iray izay nandalo ny isan'ny fisintomana 100 tapitrisa. Iza no nieritreritra taona vitsivitsy lasa izay fa afaka mamorona sy manova sary avy amin'ny telefaona finday isika nefa tsy mila mandalo solosaina.
Anisan'ireo zava-baovao ireo ny stickers mba hahafahantsika maka sary an-tsaina, bebe kokoa raha azo atao, ireo sary sy sary izay hampakatra amin'ny tambajotra sosialy samihafa izahay na hoe hametraka ny fantsika amin'ny asa manokana izy ireo. Azonao atao ny mahita sokajy toy ny fitiavana, traikefa nahafinaritra, fiotazam-boaloboka ary maro hafa.
Ankoatry ny sticker amin'ny sary mampihomehy isan-karazany, Adobe Photoshop Express dia ahitana endrika Blur vaovao. Ny tena ataony dia alao sary an-tsaina ny fifantohana malefaka ivelan'ny radius faritan'ny mpampiasa. Tsy hoe zava-baovao izy io, satria amin'ny rindrambaiko famolavolana hafa, toa ny Pixlr, efa elaela io fisehoan-javatra io.
Ary ny iray amin'ireo zava-baovao izay afaka tonga aty amintsika mandritra ny fotoana sasantsasany izay tsy maintsy hizarantsika sary iray izay nalainay. Ny fahaizana mifantina ny kalitaon'ny sary izay tahirintsika na aondrantsika. Io dia rehefa manondrana rakitra JPEG isika rehefa afaka misafidy eo anelanelan'ny ambaratonga efa voafaritra dimy, na mampiasa ilay slider hanamboarana ny kalitaon'ny sary.
Toy ny fanavaozana hafa, Adobe Photoshop Express dia ahitana ny fanamboarana bibikely mahazatra ho an'ny fampiharana iza no manome ny zava-drehetra ho tsikaritra ary mamela ny sisa amin'ny fifaninanana eny an-kianja. Miresaka momba ny VSCO, Snapseed sy ny maro hafa manana kalitao tsara izay manatsara hatrany izahay mba hanandramana tsy hanamora ny fampiharana Adobe.
By ny lalana andro lasa izay dia nahalala ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny Adobe Acrobat DC izahay y izany fomba fiasa vaovao amin'ny rakitra PDF izany. Adobe izay tsy mitsahatra manome kalitao amin'ireo vahaolana hamolavolana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe Photoshop Express dia manampy sticker, blur effects ary maro hafa amin'ny kinova vaovao